အာရှကုမ္ပဏီ အများအပြား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလို
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ အလားအလာကောင်းတွေ အများကြီး ရှိတာမို့အာရှ ကုမ္ပဏီတွေ အများအပြားက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုကြတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် UOB ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့က စင်ကာပူ လုပ်ငန်းရှင် ၆၄ အပါအဝင် အာရှကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ကို လိုက်လံ မေးမြန်း စစ်တမ်း ကောက်ယူရာမှာ ၇ဝ ရာခိုင်နှုံးကျော်ကျော်က လာမယ့် တစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာ သွားရောက် လုပ်ငန်း ချဲ့ထွင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
UOB ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ Mr Sam Cheong က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြည့်အဝ အသုံးမချနိုင်သေး တဲ့ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ကြီးရှိနေတဲ့ အပြင်၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ အမြောက်အများ ရှိနေတာကြောင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဥပဒေ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နည်းပါးတာရယ် ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်တွေ အများအပြား ရှိနေတာရယ်က စင်ကာပူ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဘဝင်မကျ စိတ်မအေးနိုင်ပဲ ရှိစေတယ်လို့လဲ UOB ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောကြားကြောင်း စင်ကာပူ နိုင်ငံထုတ် The Straits Times သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အသုံးချရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်တွေ အခက်ကြုံနေ
ထိုင်းမှာ တရားမဝင်အလုပ်သမားပပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေ
မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ဘာမျိုးးစေ့ချချ “ရွှေပင် ငွေပင်” ပေါက်တယ်လို့
May 06, 2014 09:42 PM
မြန်မာစကား “တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေ” ဆိုတာကို နားလည်လွဲတာ ဖြစ်ပါလိမ့်ယ်။
May 07, 2014 02:00 PM
Rule of law and transparency is still very poor. Third-world salaries and first-world costs of living drive to corruption everywhere. Corrupt Junta and Drug Lords are playing with their dirty money and making Burma - the most expensive property and land in the world.
May 06, 2014 11:10 AM